Diiwaanka iyo Mashruuca Haynta | Carewell SEIU 503
Qorshayaasha La Ansixiyay
Tababarkaaga Carewell SEIU 503
Tababbarka Shaqaalaha Cusub
COVID-19 aasaasiga Webinar
Diiwaangelinta iyo Haynta Mashruuca
Carewell SEIU 503 waxay bilaabeysaa howsha soo saarida barmaamij cusub oo dijitaal dijitaal ah si ay ula mid noqoto bixiyeyaasha daryeelka iyo macaamiisha. Diiwaankani wuxuu beddeli doonaa diiwaanka OHCC ee hadda jira wuxuuna siin doonaa dadka isticmaala xalal adag, xalka tiknoolajiyadda farshaxanka.
Waxaan ubaahanahay caawintaada adoo ku siinaya talo iyo jawaab celin ku saabsan waxaad uga baahan tahay barxad Diiwaan galineed, sida ay u ekaan doonto, u shaqeyn doonto, una taageeri doonto isticmaaleyaasha. Macluumaadkan ayaa fure u noqon doona guusha Diiwaanka.
Sahanka Ka Qaybqaadashada Mashruuca Diiwaanka iyo Haynta
Tallaabada 1 ee 4
Fadlan waxoogaa daqiiqad ah si aad noogu soo sheegto sida aad diyaar ugu noqon lahayd ka-qaybgalka iyo sida aad u jeclaan lahayd inaannu kula soo xidhiidhno. (Fadlan calaamadee dhammaan inta ku habboon)*
Waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo daraasad (sahan): Sahanadani waxay waydiin doonaan su'aalo waxayna u oggolaan doonaan kaqeybgalayaasha inay soo bandhigaan ra'yi iyo talo ku saabsan waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay ka rabaan barmaamij cusub oo Diiwaan gelin ah. Sahaminta waxaa lagu dhammaystiri karaa si madaxbannaan iyada oo loo marayo xiriirin laga heli doono wax yar ka dib bogga 'Carewell SEIU 503'.
Waxaan diyaar u ahay inaan kaqeyb galo kooxaha xallinta: Kooxahan waxaa martigelin doona Carewell SEIU 503 waxayna kujiraan kajawaabida su'aalaha iyo kaqeyb galka doodaha kusaabsan fursadaha Diiwangalinta iyo baahiyaha isticmaalaha / rabitaanka
Waxaan diyaar u ahay inaan kaqeybqaato kooxaha khibradaha isticmaalaha: Kuwaani waxaa martigelin doona iibiyaha si uu ugu lugeeyo isticmaaleyaasha adoo adeegsanaya Diiwaanka cusub. Kadib waxaa lagu weydiin doonaa fikirkaaga iyo jawaab celintaada ku saabsan qaabeynta iyo astaamaha Diiwaanka, waxaad jeceshahay iyo kuwa aadan ka helin si ay u hagaajiyaan Diiwaanka.
Waa maxay habka aad doorbidayso ee wada xiriirka?*
Labadaba / Ama
Ujeedada su'aalaha soo socda ayaa ah in la hubiyo matalaadda shaqsiyaadka ka soo kala jeeda asalka iyo goobaha kala duwan ee Oregon.
Kee sida ugu fiican kuu qeexayaa: (Calaamee inta ku habboon oo dhan)*
Loo shaqeeyaha Sharciga Caadiga ah
Kaaliyaha Shakhsiyeed (Dulaal)
Shaqaalaha Taageerada Shakhsiyeed
Shaqaalaha Daryeelka Guriga
Ma siisaa adeegyo taageero ah xubin qoyska ka mid ah?*
Luqadda Aasaasiga ah:*
Aan Binary ahayn
Ku dhawaaqista la doorbiday:
Sidee lagu aqoonsan karaa?*
Afrikaan Mareykan ah ama Madow
Hindida Mareykanka ama Dhaladka Alaska
Isbaanish ama Laatiino
Dhaladka Hawaii ama Jasiiradaha Baasifigga ee Kale
Caddaan ama Caucasian
Laba ama ka badan
Aaggan waxaa loogu talagalay ujeeddooyinka ansaxinta waana in loo daayaa isbadal la'aan.
Carewell SEIU 503 waa qoyska tababarka iyo manfacyada adag ee ay bixiso SEIU 503 daryeelka guriga iyo bixiyeyaasha taageerada shaqsiyadeed si kor loogu qaado noloshooda. Si cad loo bixiyay, si fudud oo la isku halleyn karo, tani waxay siineysaa xasiloonida, caafimaadka, xirfadaha iyo tababbarka shaqaalaha u qalma.
Dhammaan waxtarrada waxaa bixiya RISE Partnership , oo ah adeegga kaalmaynta waxtarka shaqaalaha.
Booqo Iskaashiga RISE
Emailka Tababarka: carewellSEIU503training@risepartnership.com
Faa'iidooyinka Email: carewellSEIU503benefits@risepartnership.com
© Iskaashiga kaca kaca 2020. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Degel loogu talagalay Wakaaladda XO
Is dabool 2021! Diiwaangelinta Furan ee qorshooyinka caymiska caafimaadka ee 2021 ee Suuqa Suuqa Federaalku waa Nofeembar 1 - Diseembar 15.
Adigoo sii wadaya isticmaalka bogga, waxaad ogolaatay isticmaalka cookies-ka. Macluumaad dheeraad ah.
Dejimaha cookie-ka ee degelkan ku yaal ayaa loo dejiyey inay "u oggolaadaan cookies" si ay kuu siiyaan khibradda ugu wanaagsan ee ugu habboon ee wax lagu eego. Haddii aad sii wadato adeegsiga degelkan adiga oo aan beddelin setinkaaga cookie ama aad gujiso "Aqbal" hoosta markaa waad oggolaanaysaa tan. Si aad wax badan uga barato siyaasadeena cookie-ga iyo sida aan ula macaamilno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad ku soo gudbin karto degelkan, fadlan eeg tan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.